China China fashion ipholiyesta yokubamba kabini sasemini kupholile ibhegi mveliso kunye nabenzi | Ipikvalue
Le ngxowa ebandayo yesidlo sasemini / i-6 inokupholisa ibhegi / ibhegi yesidlo sasemini ephindwe kabini ngomtya wamagxa yinto yakudala kwaye iyathengisa kakhulu. Olu luyilo lwale ngxowa ipholileyo igqunyiwe ilulungele kakhulu ulwandle kunye nangaphandle. Elona gumbi liphambili lebhegi epholileyo egqunyiweyo imalunga ne-4L. Kwanele ukugcina ibhokisi yesidlo saseminikunye nezinye iziqhamo. Ingxowa ebandayo / i-6 inokupholisa ibhegi / uxande wesidlo sasemini ikwindawo yokungena manzi. Xa ukuvalwa uziphu kunye umtya shouler, ibhegi kupholile / 6 ingaba ibhegi kupholile / yoxande ibhegi sasemini kulula ukuqhuba. Ungaqinisekisa konke ukutya okanye isiselo esikhuselekileyo sikhuselekile kwaye sikhuselekile ekuhambeni. Izinto zangaphandle zobhaka opholileyo yi-420D ipholiyesta oxford okanye ipholiyesta yesibini yeethoni ene-PVC eyomeleleyo ehlala ixesha elide. Uninzi lwebhegi yangaphandle yenziwe ngeli laphu le-oxford. Umbala webhegi epholileyo / 6 unengxowa epholileyo / ibhegi yesidlo sasemini esixande inokuba yi-PEVA emhlophe, i-PEVA engwevu okanye ifoyile yealuminium ekhuselekileyo kunxibelelwano lokutya nokucoca ngokulula ngelaphu elimanzi. Mkhulu ngokwaneleyo ukuba ungakukhuphela ukutya uyokusebenza, isikolo njalo njalo. Ungabeka umkhenkce ngaphakathi kwengxowa ebandayo / i-6 inokupholisa ibhegi / ingxande yesidlo sasemini kunye neziselo, iziqhamo ukugcina ixesha elibandayo ixesha elide.
Ubukhulu: 22 * 15 * 21cm
Iinkcukacha zemveliso: 420D ipholiyesta kunye PEVA / Aluminium ngefoyile ye lining. Izinto zokufunda ziya kudlula kuvavanyo lwe-REACH kunye neCa 65. Umbane uya kuba ngumgangatho wokunxibelelana nokutya.
Singomnye wabathengisi beengxowa ezipholileyo eXiamen, China. Sigxile kwiindawo ezininzi ezipholileyo, ibhegi yokuthenga, ibhegi yaselwandle kunye nobhaka njalo njalo. Le ngxowa ithandwa kakhulu e-USA nakwimakethi ye-EU.